Warshadda Dharka Difaaca iyo alaab-qeybiyeyaasha | New Aasiya Pacific
Ction Hordhac Naqshadeynta Alaabta】
Naqshad Laba-Biir Leh
Xidhmada Xidhmada Xargaha
Xarig kasta waxaa lagu daboolay cajalad, oo dhexda waxaa lagu isticmaalaa sharooto dhejis ah oo gudaha ah, taas oo sifiican kor ugu qaadeysa ilaalinta xujooyinka iyo isku xirnaanta dharka.
Xaraashku wuxuu isticmaalaa xarigga laastikada gudaha si loogu sii wanaajiyo adkeynta iyo ilaalinta.
Naqshadeynta Placket Design
Codsiga zielka hore ee bartamaha ayaa kuu oggolaanaya is-gelin iyo iska-qaadid fudud halka naqshadaynta baakada zipper ay keento difaac wanaagsan.
Xidhitaanka Hoos Udhaca Hoos Udhaca ah
Qaybta laastikada gudaha waxaa lagu dabaqayaa gunta hoose, oo ay kujirto dabool kabo ah, oo kor u qaadaya taam ahaanshaha iyo difaaca.
Ction Isbarasho badeecad
Dharka la iska tuuro, iyo dharka ilaashada
Qalabka: Polypropylene spunbonded filimka PE wuxuu dahaaran yahay nonwovens
Nuxurka: 100% polyester
Faa'iido: Bakteeriyada Beeraha ah, Anti-static, soft, Waterproof, Nuux
1. Geedi socodka oo dhan iyo sheyga ceyriinka ah waxay gaarayaan heerarka ugu sareeya.
2. Dharka, cajaladaha shaabadhadhka iyo xaashiyaha wax lagu xiro waxay waafaqsan yihiin heerarka qaran.
3. Qaanuunka difaaca wuxuu ka sameysan yahay PP spunbond dhar aan dhogorta lahayn oo lagu dhejiyay filimka PE. Qalabka ayaa xoog badan, jilicsan taabashada, maqaarka-u roon, ku habboon in la xidho, oo ku xoog badan waxqabadka antiistatic.
4. Waxay leedahay waxqabad wanaagsan oo ka hortagga-soo-dhex-gelinta, hufnaanta shaandhaynta sare, iska caabbinta qoyaanka dusha, xoogga iyo firfircoonida hawada, taas oo u oggolaaneysa inay si wax ku ool ah uga hortagto biyaha iyo boorka.
1.Qalabka isku-tolidda, isku-xirnaanta iyo xiridda kuleylka kuleylka ayaa lagu dabaqaa qaybta isku xirka qaybta dhawrista. Godadka tolida waa la xirmay. Boorarka tolku waa inay ahaadaan 8 illaa 14 togitaan 3cm. Xargaha ayaa toosan oo si sax ah u fidsan. Waa in aan loox ku xirneyn. Qaybaha weelka leh ama kuleylka kulul waa inay ahaadaan kuwo fidsan oo xiran oo aan laheyn xirmooyinka hawada.
2. Xaashiyaha dharka xirey waa inaysan bannaanka soo dhigin, oo jiidiyaha zipper waa inuu iskiis isku xiro.
3. Qaab dhismeedka is-difaaca ayaa ah inay ahaato mid isku-dhafan, fududahay in la xidho oo laga baxo, oo kala-goysyadu waa inay ahaadaan kuwo is adag
4. Xarkaha jilbaha iyo canqowga, iyo suufka xargaha ah iyo furitaanka dhexda.
5. Labiska difaaca ayaa kujira guud ahaan qaab dhismeedka, oo ka kooban hooda kor u kaca iyo surwaal.
Hore: Wejiga Wejiga
Xiga: Go'doon Gaara A
Go'yaal ilaalin ah, Dharka Ilaalinta, Biyo-caddeynta Biyaha, Biyaha-Proof Hdpe Apron, Dust-Proof Pet Face Shield, Dharka Caafimaadka ee la tuuri karo,